Country Club - COVID-19 Precaution & Actions
In the interest of residents and Country Club members' health and wellbeing we expect that each person using the facility adhere to the following regulations:
No visitor allowed in the Country Club, members and resident access only
Maximum 8 persons can use the Gym at any given time; and adhere to Social Distancing Protocols at the Swimming Pool and Tennis Courts.
Regular pest control and disinfection at 9:00pm
Mask must be worn at all time outside your homes
Kindly note that Country Club business hour will be changed until further notice due to the COVID 19 precaution plan accordingly.
Swimming Pool - 6:00 AM ~ 8:00PM
Gym - 6:00 AM ~ 9:00PM
Tennis - 6:00 AM ~ 9:00PM
Spa & Salon - 9:00 AM ~ 9:00PM
Buggy Service - 7:00 AM ~ 8:00PM
Safe-Distancing Measures We would also like to strongly suggest that you take stricter safe-distancing measures and avoid any non-essential contact. COVID-19 symptoms Should you show any COVID-19 symptoms or have travel history to parts of the world infected with COVID-19, the recommendations are;
Country Club – Covid-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများနှင့် Country Club အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ရှေးရှုလျက် Country Club မှ ချမှတ်ထားသော အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဥ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါသည်။
၁. Country Club တွင် ပြင်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကန့်သတ်၍ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသာ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၂. Gym တွင် အများဆုံး လူ ၈ဦးသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရေကူးကန် နှင့် တင်းနစ်ကွင်းများတွင် တဦးနှင့်တဦးခပ်ခွာခွာနေရမည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
၃. ရေကူးကန်တွင် အသက်ကယ်ဝန်ထမ်း (Lifeguard) ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၄. ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေကျဖြစ်သော ပိုးမွှားနှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းကို ည ၉ နာရီအချိန်တွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅. မိမိတို့ အိမ်ပြင်ပသို့ထွက်သည်နှင့် နှာခေါင်းစည်းများကို ဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။
COVID - 19 ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအစဥ်အတိုင်း Country Club ၏ အချိန်များကို နောက်ထပ်ကြေညာမှု
မပြုလုပ်မီအထိ အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။
Buggy Service - 9:00 AM ~ 6:00PM
ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် မလိုအပ်ပဲထိတွေ့မှုများကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် တဦးနှင့်တဦးခပ်ခွာခွာနေရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
လူကြီးမင်းအနေနှင့် Covid-19 ရောဂါလက္ခဏာများ ပြသခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ Covid-19 ရောဂါ
ကူးစက်ပြန့်ပွားနေသည့် နိုင်ငံတစ်ခုခုသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးသွားမှတ်တမ်းရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါသည်။
အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်ခန့် အခြားသူများနှင့်ထိတွေ့မှု မပြုလုပ်ပဲ မိမိဘာသာတစ်ဦးတည်းနေထိုင်မှုပြုလုပ်ပါ။
ကောင်းမွန်သော တကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်မှုပြုလုပ်ပါ။ လက်ကိုမကြာခဏဆေးခြင်း၊ လက်ဆေးရာတွင် ထိရောက်မှန်ကန်စွာဆေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပါ။
Covid-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်မှန်ကန်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ပြထားသော ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပြုမူဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ ဖုန်းလိုင်းဖြစ်သော ၁၄၆၁ သို့ လည်းကောင်း ၀၉၉၅၅၄၀၀၉၁၁ လည်းကောင်း ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ၏ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းဖြစ်သော ၀၁၃၆၈၄၃၂၃ ကို ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ချမှတ်ထားသော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားလိုပါသည်။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်း၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အခြေအနေများကို ချက်ချင်းလက်ငင်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်နိုင်စေရန် နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။